Imibono yokujabulela impelasonto njengombhangqwana | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, Ezothando
hacer ihlela njengezithandani Kuyinto enhle, ngoba iyasiza ukuthuthukisa ubudlelwano futhi ngaphezu kwakho konke isigcwalisa ngokuhlangenwe nakho okusha nezikhathi ezikhethekile. Akudingeki ukuthi ulinde amaholidi ukuze ukwazi ukwenza izinhlelo ezincane, ngoba sinezimpelasonto. Kungakho sizokunikeza imibono nokukhuthazwa kokwenza izinhlelo zempelasonto njengabantu abashadile.
Un ngempelasonto njengezithandani yezinhlelo eziningi, ikakhulukazi uma sazi ukuthi singakufuna kanjani okunikezwayo futhi sijabulele okwehlukile. Ngokusobala, kuzofanele sicabange ngezinto zokuzilibazisa nezinto abazithandayo zombhangqwana ngamunye, kepha siyohlala sithola uhlelo oluvumelana nalokho esikuthandayo.
1 Ukuphunyuka endlini yasemakhaya
2 Impelasonto e-spa
3 Izintaba zemvelo
4 Ukuthola amakhona
5 Impelasonto yokuzijabulisa
6 Impelasonto edolobheni
7 Imizila ye-gastronomic
8 Ukuphunyuka uye eParis
Ukuphunyuka endlini yasemakhaya
Olunye lwezinhlelo ezifiseleka kakhulu ngemuva kwesonto lomsebenzi ukuya endaweni ethule nomlingani wethu. Ukuphunyuka endlini yasemaphandleni kufanele ukujabulele njengombhangqwana. Kunezindlu eziningi zasemakhaya ezinikezayo ukuvakashela imvelo ezungezile. Singafuna nezindlu esingajabulela kuzo isidlo esijwayelekile noma lezo ezinamachibi amakhulu angaphandle. Impelasonto endlini esemaphandleni ingaba yinto enhle yokuvuselela amabhethri futhi ujabulele ukusondelana njengabantu abashadile.
Lolu olunye uhlelo olufunwa kakhulu ukuchitha impelasonto nabashadikazi. A I-spa isinikeza inqwaba yemibono yokuphumula. Ngokuvamile, kunokunikezwa lapho ungasebenzisa khona indawo ejwayelekile yamachibi futhi izindlela zokwelashwa zivame ukukhokhelwa kwenye indawo. Imibhangqwana inamaphakheji akhethekile okuthatha ukusikhipha ndawonye noma okunye ukwelashwa. Kusuka ekugezeni iJacuzzi kuye ekuzameni ukwelashwa emanzini, ama-spas anikela ngazo zonke izinhlobo zemibono ukuze impelasonto ingabi yisicefe.
Imibhangqwana ekhuthele kakhulu ingajoyina yenza umzila othile wokuqwala izintaba. Kunemizila ebhalwe kahle kakhulu, enamazinga obunzima ajwayele isimo sethu somzimba, ukuze sikwazi ukukhetha ovumelana kahle nathi. Kule mizila kungenzeka ungene emvelweni futhi ujabulele ukuthula okukhulu ngenkathi wenza umdlalo onempilo kakhulu. Ukwabelana ngalezi zinhlobo zokuzilibazisa nomlingani wakho kungumbono omuhle futhi ukuhamba ngezinyawo kuyonga kakhulu. Kulula ukuthola imizila uma singahlali emadolobheni amakhulu, ngaphandle kokuthi sihambe kakhulu.
Impela kukhona ekhoneni elikhethekile eduze nalapho uhlala khona ukuthi usasibonile. Ungenza uhlu lwezindawo eziseduze ezingakatholakali ofuna ukuya kuzo. Lezi zinhlobo zokuvakasha azidingi okungaphezu kwempelasonto, ngakho-ke zilungele ukuvakashelwa njengezithandani kwelinye icebo. Ukusuka emadolobheni amancane kuya endaweni yemvelo noma idolobha eliseduze, konke kungaba yindawo enhle yokuphunyuka kancane enkambisweni nabashadikazi.
Uma nobabili nithanda imizwa, ngokuqinisekile nizoba nesikhathi esimnandi nge ngempelasonto ye-adventure. Ngalokhu sisho uhlelo lapho nobabili ningajabulela khona ulwazi olusha olujabulisayo. Ukusuka eku-rafting kuya ekugibeleni amahhashi, i-zip-lining noma ukukhuphuka kwamatshe. Kumele nje sithintane nezithandani futhi sibheke amathuba esinawo eduze kwalapho sihlala khona. Kulezi zinsuku kulula kakhulu ukuthola imininingwane ngewebhu, ngakho-ke kungenzeka kakhulu kini nobabili.
Uma unomuzi engqondweni okade wafuna ukuya kuwo futhi useduze impela, qhubeka. Izinhlelo zedolobha nazo zingaba mnandi kakhulu. Uma sizovakashela idolobha njalo kuyodingeka silethe okuthile okuhlelwe ukuze singaphuthelwa yilutho. Impelasonto ingaba mfushane ngokuya ngedolobha ngoba kwezinye kuningi ongakubona. Kusukela izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu emigwaqweni engokomfanekiso, izindawo ezinempilo nezindawo zokudlela ezingaphuthi. Ukwenza uhlu kungasisiza ukuthi silibone ngokuphelele idolobha ngaphandle kokusishiyela noma yini ebalulekile.
Kukhona imibhangqwana ethanda ngempela okuhlangenwe nakho kwe-gastronomicnjengoba bekwazi ukujabulela ukunambitheka nezitsha ezintsha. Kunoma yikuphi ukuphunyuka singazama izitsha ezijwayelekile noma siye endaweni yokudlela enezibuyekezo ezinhle. Kepha kunemibhangqwana eminingi ethokozela ukwenza imizila ye-gastronomic. Singabheka imicimbi ekhethekile, efana nemincintiswano yama-tapas, eya ngokuya iba yande kakhulu, kepha futhi kungenzeka ukuthi uye ezindaweni zokudlela nezindawo zokudlela ezithandwa kakhulu nganoma yisiphi isikhathi.
Ukuphunyuka uye eParis
Uma sifuna ukuphonsa indlu ngefasitela, akukho okunye ukuthanda ukwenza amapulani njengezithandani Kunokubalekela ngempelasonto okusheshayo eParis. Kukhona izindiza eziphansi, yize zingahlangani ngaso sonke isikhathi ngempelasonto, kepha singabheka ezinye izindlela. Iphuzu ukumangaza umlingani wethu nedolobha elinothando kakhulu emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izinhlelo zempelasonto njengezithandani
Ndiza e-Ibiza ngama-euro angama-8 kuphela